‘स्मार्ट लाइसेन्सको ढिलाइले सरकारकै बेइज्जत भयो, अब एकै दिनमा पाउने बनाउँछौँ’ « हाम्रो ईकोनोमी
तपाइँहरुले लाइसेन्स दिन नसक्दा केही नागरिकले २ वर्षदेखि रसिदको भरमा सवारीसाधन चलाइरहनुभएको छ, उहाँहरुले लाइसेन्स कहिले पाउनुहुन्छ ?
यो प्रश्नको जवाफ दिँँदा दिँदा म हैरान भैसकेँ । लाइसेन्स नपाउनेहरुले अबको ३ महिनाभित्र पाइसक्नुहुन्छ । मैले तपाइँसँग भन्नकै लागि यो कुरा भनेको छैन, गर्नको लागि भनेको हो । मैले हाम्रो यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि कार्ययोजना पेश गर्दा मास प्रिन्टर सञ्चालनमा आएपछि ३ महिनामा पुराना लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने योजना पेश गरेको छ । त्यसपछि हाम्रो माग भन्दा मेसिनको छपाइ क्षमता धेरै हुने भएकाले एकैदिनमा प्रिन्ट गरेर लाइसेन्स दिन सकिन्छ ।
तपाइँहरुले यसरी प्रतिबद्धता जनाएको त धेरै भयो । नागरिकलाई कहिलेसम्म यसरी आश देखाएर खिस्रिक्क पार्ने ?
यो अलिकति प्राविधिक विषय पनि हो । तपाइँ हामी सबैलाई थाहा छ, गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्न ल्याएको मेसिन तयार गर्न ६ महिना लगायो । ६ महिनापछि बल्ल छपाइ सुरु भयो । हुन त राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न निकै हतारो नभएर पनि ढिलाइ भएको होला । तर हामीले त मेसिन ल्याएको २ महिनामा परीक्षण नै गरिसक्यौँ । चाँडो हामी गरिरहेका छौं । तर नागरिकले सोचेअनुसार चाँडो भएको छैन ।
यो तपाइँको पक्का बाचा नै हो ?